PVC Ball Madax
Ture Union Ball Madax
Ball Waraabka Madax
PVC Compact Ball Madax
PVC Balanbaalis Madax
PVC Hubinta Madax
Sifeeyaha otomaatiga ah
Xarunta Filter otomaatiga ah
Wadayaasha Iyo rusheynta
Buufiyeyaasha Qoryaha waaweyn
Mini Madax iyo rakiban
Kursiga ku dheji
Madax Xakamaynta Haydarooliga
Cirbadaha Bacriminta Venturi
PVC LayFlat tubbo Oo rakiban
Qalab Iyo Kuwa Kale
Shaybaarada, waqtiga hogaamintu waa ilaa 7 maalmood. Soosaarka ballaaran, waqtiga hogaamintu waa 20-30 maalmood kadib helitaanka lacagta deebaajiga. Waqtiyada hogaamintu waxay dhaqan galayaan marka (1) aan helno deebaajigaaga, iyo (2) waxaan helnay ogolaanshahaaga ugu dambeeya ee alaabadaada. Haddii waqtiyadayada hogaamintu aysan ku shaqeyneynin waqtigaaga ugu dambeeya, fadlan ka gudub shuruudahaaga iibkaaga. Xaaladaha oo dhan waxaan isku dayi doonnaa inaan la jaanqaadno baahiyahaaga. Xaaladaha badankood waan awoodnaa inaan sidaas yeelno.
Ma dammaanad qaadeysaa inaad si ammaan ah oo ammaan ah u gaarsiiso alaabooyinka?
Yaan nahay Ma tahay
GreenPlains waxaa la aasaasay sanadkii 2009. oo ah mid ka mid ah kuwa ugu caansan soosaarka waxsoosaarka waraabka, oo ay ka go'an tahay bixinta xalalka waxsoosaarka waraabka ee adeegsadayaasha caalamiga ah, waxay ku hogaamineysaa warshadaha tayada wax soo saarka ugu sareysa iyo sumcad wanaagsan suuqa caalamiga ah.
Halkee u na soo hel
Aaga Warshadaha Bafang, Dacheng, Langfang City, Gobolka Hebei, Shiinaha
Weydiimaha ku saabsan badeecadeena ama pricelist, fadlan noo dhaaf emaylkaaga oo waan la xiriiri doonnaa 24 saac gudahood.
Ka soo Instagram
Waxaan u adeegsannaa cookies si aan u hagaajino naqshadeynta degelkeenna. Markaad ku sii wadato booqashadaada websaydhka, waxaad oggolaatay isticmaalka cookies-ka. [Macluumaad dheeraad ah]OK